မြန်မာ့သားကောင်း: လူပျိုကြီး အပျိုကြီတန်ဖိုးနင့် အိမ်ထောင်သည်အလှ
အိမ်ထောင်သည်၊ မိန်းမနောက်လင်ယူ တစ်ခုလပ် မိန်းမသေသွားရင် မုဆိုးဖို မိန်းမနောက်လင်ယူပြီးသေသွားတော့တခုလပ်မုဆိုးဖို ကလေးမွေးပြီး မိန်းမနောက်လင်ယူ ကလေးကျန်ခဲ့ ရင် သားတစ်ယောက်တခုလပ် မိန်းမက ကလေးထားပြီးသေသွားရင် သားတစ်ယောက်မုဆိုးဖို အမျိုးမျိုးရာထူးတွေတိုးနေကြတာလေ မိန်းမ နောက်လင်ယူရင်လည်း လင်ကြီးဆိုတဲ့ဂုဏ်လေးတခုတောင် အဆစ်ပါသေးရဲ့ ၊၊
လူပျိုကြီးတွေ ရည်စားထား သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ပြတ်စဲ နောက်တစ်ယောက်ထား လူတွေဘာမှ မပြောဘူး အိမ်ထောင်သည် အသစ်တွေ့ လို့ချစ်မယ် မပြင်နဲ့ မယားငယ်နေတဲ့သတင်း ဝက်ဝက်ကွဲဖို့ သာ ပြင်ထားပေတော့ ၊၊ဒီလို ဒီကြောင်း အကြောင်းစုံကို ရောင်းကုန်ထက် တွက်တဲ့ နေရာမှာ တော်လို့အပူမရှာပဲ လူတကားတွေ့ ရဲ့နှုတ်ဖျားက လူပျိုကြီးဆိုတဲ့ခေါ်သံနဲ့ ပဲ ပိတိပွားပြီး ဂုဏ်ရှိန်မြင့် ခဲ့ ကြတာပေါ့ ၊၊
မရလို့ မယူတာ မဟုတ်ဘူး(မြတ်နိုးတန်းဖိုးထားသည့် သူ) ယူတာမရလို့မာန်မာန အသက်ဆက်ပြီး ဟိုတစ်ယောက်ကို မရလို့ လေ..........မိန်းမရပြီးရောဆိုပြီး ဒီတစ်ယောက်ကိုယူခဲ့ တာလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကြောင်းတစ်ခု အတွက် ရောင်းချစရာ အတင်းဂျာနယ်တွေများများထွက်မှာစိုးလို့သစ္စာတရားကို နှလုံးသား တံခါးဝ မှာ ချိတ်ပြီး မင်းမှမရရင် အကျဉ်းသားဘဝ (အိမ်ထောင်ကျသည်ကို ဆိုလိုသည်)ကို လုံးဝမခံယူဘူးလို့ကြွေးကြော်ရဲတဲ့ဇာနည်ယောကျာ်း သူရဲကောင်း များပါပဲလေ၊၊ လူပျိုကြီး တဲ့အခေါ်ခံဖို့ငွေပေးဝယ်လို့ မရသလို အာဏာနဲ့ လည်း ခြိမ်းခြောက်လို့လဲ မရပါဘူး လူပျိုကြီးဆိုတာ အချိန်တွေ လူတွေရဲ့မနာလိုစိတ် အချစ်ကို အချစ်စစ်မှ မြတ်နိုးမူ့ တွေ စသည့် ဖြင့်ပေးဆပ်မူ့ အများကြီး ရင်းခဲ့ ပြီးမှ ရခဲ့ တာပါ ၊၊ ယောကျာ်း တစ်ယောက်ဟာ အိမ်ထောင်သည် ဘဝကို ကူးဖို့ ဆိုတာ ရက်ပိုင်းမကြာပါဘူး၊၊ အိမ်ထောင်ညည်တစ်ယောက်ဟာ လူပျိုကြီးဆိုတဲ့ဘဝကို သေတောင်မရတော့ ပါဘူး၊၊ လူတွေ ပြောကြသေးတယ် အကြင်နာတရား မရှိလို့လူပျိုကြီးဖြစ်တာတဲ့အကြင်နာအားတွေ များပြီး အိမ်ထောင်တွေ ပြု နောက်ဆက်တွဲ မယားကြီး မယားငယ် အပြိုင်အဆိုင်ထား ဖအေတူ မအေကွဲ သားသမီးမျက်နာပေါ်က် အမျိုးမျိုးကို ချစ်အားတွေပို ပြဿနာတွေယို နဲ့ဘာတဲ့ပုဒ်မတွေတောင် ထုတ်ပြန်ထားသေးတယ် အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မူ့မယားငယ်နေမူ့သားသမီး မထောက်ပံ့ မူ့အမျိုးမျိုး ပါပဲ (ဒီဘလော့ ကိုဖတ်တဲ့ သူတွေ ထဲမှာ ဥပဒေအကြောင်း နားလည် သူများပါ ပါက ပုဒ်မများ ကူညီး ရေးသားပေးကြရန် တောင်းဆိုပါတယ်နော်) ထို့ ကြောင့်လူပျိုကြီးများသည် အကြင်နာမများပဲ တစ်ဦး တစ်ယောက်ထဲ အတွက် အကြင်နာတရားကို ရေးသာ အာဂစာပေပညာရှင်ကြီးလဲ ဖြစ်ပါတယ်၊
အပူအပင်ကင်းတဲ့သူတွေထဲမှာ လူပျိုကြီးများလည်းပါပါတယ် ကလေးတွေလိုပါပဲ သူတို့ ဘဝတွေဟာ သားကျွေးမူ့မယားကျွေး ခလေးကျောင်းစရိတ် စသည့် ဖြင့်အမျိုးမျိုးကုန်ရသော ငွေကြေးတွေ သုံးစရာမရှိတော့အပူအပင် ကင်းမဲ့ သလို ဘောဘတရားမရှိသူတွေလဲဖြစ်ပါတယ် အလှူ ဧည့် ခံ ပွဲများတက်ရောက် ရာတွင်လည်း လူပျိုကြီးများကို အိမ်ထောင်သည် များက အမီ မလိုက်နိုင်ပါ အိမ်ထောင်ရှင်ဆိုကတည်းက ကလေးတွေတစီတတန်းနဲ့အဝတ်အစားကအစ ဘိုသီဘတ်သီဝတ်ပြီးလာကြပေမယ့် လည်း လူပျိုကြီးတွေကတော့အဝတ်ကို ကော့ နေအာင်ဝတ်ပြီး အပူအပင်မရှိ ပွဲကိုအစမှအဆုံး အေးအေးဆေးဆေးနဲ့နေနိုင်တဲ့ကမ္ဘာ့ ကျော် မင်းသားများလည်း ဖြစ်ပါတယ် ၊
လူပျိုကြီးများက သဒ္ဒါတရားနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမူ့ များကိုလည်း အိမ်ထောင်သည်များထက် ပိုလုပ်နိုင် ပိုလှူနိုင်ကြပါတယ်၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာပဲ ကြည့် ပါ အလှူ တစ်ခုခု လုပ်တော့ မယ်ဆိုရင် လူပျိုကြီးများကို အင်ရှာပြီး အလှူပွဲ အစမှအဆုံး အကူအညီတောင်းသူကများပါတယ် ထို့ ကြောင့်ထိုအလှူများထဲမှာ ကုသိုလ်များလည်း သူတို့ ရကြတယ် နောက်တစ်ခု ပေးကမ်းစွန့် ကြဲ ခြင်း တွေများများ လုပ်ပြီး လိုအပ်တဲ့တောင်းဆုတွေကိုလည်း ဘုရားမှာ အမြဲဆုတောင်းကြတယ်( ဘာဆုတောင်းလဲ ဆိုတာတော့လူပျိုကြီးတွေကိုသာ မေးကြည့် ပေါ့ နော်)၊၊
လူပျိုကြီးတော်တော်များများဟာ မုသား အလိမ်အညာစကားကင်းသူများဖြစ်တယ်လို့ ပြောရင် သင်ယုံမလား ? .အမှန်ပါပဲ လူပျိုကြီးတွေဟာ အလိမ်အညာ ကင်းပါတယ် ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့သူတို့ ဟာ လွတ်လပ်စွာ သွားနိုင်လာနိုင် ချုပ်ခြယ်မဲ့ သူ မရှိတော့အိမ်ထောင်သည်တွေလို မိန်းမကြောက်ပြီး အနည်းဆုံး ဘီယာ ဆ်ုင်ထိုင်နေရင်တောင် မိန်းမကမေးလိုက်ရင်း လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ထိုင်နေတာပါလို့အညာစကား သုံးကြရတာပါပဲ အချိန်တန်လို့အိမ်ပြန် မိန်းမ ပိုက်ဆံ အပ်ဖို့မပြည့် လို့မိန်းက စစ်တဲ့ အခါ ဟိုဟာ ဒီယာနဲ့အကြောင်း ပြချက် အမျိုးမျိုးပြလိမ်ညာ တတ်ကြတာတွေကြီးပဲလေ လူပျိုကြီးတွေကတော့ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံကိုယ်၇ှာ ကိုယ့် ဟာ ကိုယ်သုံး လိမ်ညာစရာဘာမှမရှိတော့လိမ်ညာခြင်းကင်းကြတာပေါ့ လေ၊၊
သက်တမ်းကြာတဲ့ရုပ်ကြွင်းဆို ပညာရှင်တွေက စိတ်ဝင်စားသလို ရှေ့ ဟောင်းပြတိုက်တွေမှာ ဘာလို့ လူတွေ များနေတာလည်း စိန်ဆိုတာ ရှားပါး ပစ္စည်းမို့ တန်းဖိုးမြင့် တင်တာပေါ့နှစ်ချို့ ဝိုင်ဟာ သက်တမ်းကြာလေ အရသာရှိလေ လူတွေ ကြိုက်လေမို့လူပျိုကြီးဆိုတာလဲ တန်းဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အနှိုင်းမဲ့ ဂုဏ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူများဖြစ်လို့လူတွေကလူပျိုကြီးလို့ခေါ်တာကို ပြုံးပြုံးလေး အခေါ်ခံလိုက်စမ်းပါ လူပျိုကြီးတို့ ရေ......
((အကြံပေးခြင်း၊၊ ၊၊အမေများနေ့အဖေများနေ့ချစ်သူများနေ့ဟိုနေ့ ဒီနေ့ တွေ အများကြီးရှိပေမဲ့ လည်း တန်ဖိုးရှိသော လူပျိုကြီးများအတွက် စာဖတ်သူ အပေါ်င်း ကိုကို မမ ညီ ညီမများက ဆန္ဒမဲ ကောက်ခံပြီး လူပျိုကြီးများနေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်လျှင် မည်မျှပင်ကောင်းလိုက်မည် မသိ)
(မှတ်ချက်၊၊ ၊၊လူပျိုးကြီးများ ဖက်မှ ဘက်လိုက်ရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ အမှန်တရားနဲနဲလေး သိသမျှချပြတာပါ ကျွန်တော်လည်း လူပျိုးကြီးတော့မဟုတ်သေးပါဘူး ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့ သူမတွေ့ ခဲ့ ရင် ဒီလိုလေး နေမယ်လို့စဉ်စားမိလို ရေးခဲ့ မိတာ)ဒါက ကြော်ငြာတာ ဟီး......
အပျိုကြီးများရဲ့အလှတရား
လူဘဝရဲ့သက်တမ်း၃၀ နှစ်လောက်နီးရင် လူတွေက အိမ်ထောင် မကြသေတဲ့ယောကျာ်းလေးဆို လူပျိုကြီး မိန်းကလေးဆိုရင် အပျိုကြီးရယ်လို့တင်စား ခေါ်ကြတယ်နော် ကျနော့ လည်း အတူတူပါပဲ တချို့ မမ တွေကို အပျိကြီးလို့စနောက် တတ်ပါတယ်၊ သို့ သော် သေချာ တွေးကြည့် တော့အပျိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်၊ အပျိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့သီးခံနိုင်သည့်စွမ်းအား ၊ လောကဒဏ်ကို တစ်ယောက်ထဲ ဖြတ်ကျော်ရဲ့ တဲ့သတ္တိ၊ တိုင်ပင်ဖော်မလိုပဲ ဘဝကို ရည်ရွယ် သည့်ပန်းတိုင် ရောက်အောင် လျှောက်နိုင် သည့် ဇွဲ ၊ မည့် သည့် အရာမဆို တစ်ယောက်ထဲ ဆုံးဖြတ်နိုင်တာ ကောင်းသည် ဖြစ်စေ ဆိုးသည် ဖြစ်စေ တစ်ကိုယ်တည်း ခံနိုင်ရှိသော စွမ်းအား စသည့်လူပေါ်င်းများစွာ မလုပ်နိုင်သည့်အရာကို လုပ်နိုင်သော အာဂ လူသားများသာဖြစ်ပါသည်။
အပျိုကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဆို တာ တော်တော်တော့မလွယ် ကူတဲ့ ကိစ္စပါ ပထမဦးဆုံး အပျိုကြီး စလုပ်ပြီး ဆိုတာနဲ့သူငယ်ချင်း အပေါ်င်းအသင်းတွေရဲ့စနောက်တဲ့ဒဏ်ခံရပြီ အထီးကျန်မူ့ ကို မဖိတ်ခေါ်ပဲ တဖြည်းဖြည်း ရောက်လာတော့ လဲ လက်ခံပေးရတယ်၊ လူတွေက ယောကျာ်းမရတာကို ပဲ သနားသလိုလို အကြည့် လှေင်သလိုလို အပြုံးတွေကို ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားရတာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲလိမ့် မလဲနော်၊ ညည်းနက်နက်မှာ မိုးတွေရွာ လေတွေတိုက် လျှပ်စီးဒဏ်တွေ ကြားမှာ တော်ယုံလူတွေတောင် ကြောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ အပျိုကြီးတွေကတော့မျက်လုံးလေး ပေကလပ် ပေကလပ်နဲ့ဘုရားစာသာ ရွတ်ဆိုနေရတဲ့ဒုက္ခ ကို တော်ယုံလူ တွေကတော့ခံစားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ ဒါကြောင့်သူတို့ ဟာ ရဲရင့် သတ္တိ ရှိပြီး ကိုယ့် ကိုကိုယ် ယုံကြည်တဲ့သူတွေလည်း ဖြစ်တယ် ၊ အရေးအကြောင်းဆို ဟိုလူ့ အားကိုး ဒီလူအားကိုးနဲ့သိမ်ငယ်တဲ့ စိတ်မရှိသူတွေပေါ့ ။
နောက်တစ်ချက် အပျိုကြီးတွေက ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ကြီးမား သူတွေလည်း ဖြစ်တယ် သူတို့ ဟာ အချစ်ကြီးပြီး အချစ်ကို တစ်ယောက်အတွက်ပဲ သဂြိုလ်တတ်တော့တစ်သက်မှာ တစ်ယောက်ပဲ ချစ်တတ်သူဖြစ်ပြီး အကြောင်းမလှလို့ပေါ်င်းဖက်ခွင့် မရပေမယ့်တစ်ယောက်ထဲအပေါ် နားလည်း ခွင့် လွတ်မူ အပြည့် နဲ့အချစ်သစ်ကို မရှာပဲ သစ္စာရှင် ချစ်တတ်သူများ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကလေးလေးတွေ အများစုကို ကြည့် မယ်ဆိုရင်လည်း အပျိုကြီးတွေကို ပိုချစ်တတ်ကြတယ် ဘာကြေင့် လည်းဆိုတော့အပျိုကြီးအများစုက ကလေးသိပ်ချစ်တတ်လို့ ပါပဲ သူတို့ ဝမ်းနဲ့လွယ် မမွေးရပေမယ့်တကယ့် ကို အကြင်နာ တရားအပြ ည့် ထားပြီး ချစ်တတ်ကြတယ် ခွေးလေးတွေ ကြောင်းလေးတွေဆိုလည်း အပျိုကြီးတွေရဲ့အချစ်တော်လေတွေပေါ့ဒါဟာ ကြီးမားတဲ့ကိုယ်ချစ်စာ တရား လက်ကိုင်ထားပြီး သူတို့ လေးတွေ ငါမှမကျွေး ငါမှ မပြုစုရင်ဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ပြီး စေတနာထားတတ်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်၊၊
အပျိုကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ရင့် ကျက်တည်ငြိမ်နေတဲ့ အလှကိုလည်း ဘယ်ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကမှ တုနိုင်းလို့ မီမယ် မထင်ပါဘူး။ သူတို့ ဟာ အလှကို ပေါ်စေယုံပဲ ပြင်တတ်ပြီး အလွန်းအကဲ ပြင်ဆင်မူ့ များ မရှိပေ။ အဝတ်အစားက အစ လူမြင် မတင့် သော အဝတ်အစားကိုလည်း ရှောင်ကျင်ကြညည် ဘာကြောင့် လည်းဆိုတော့လူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားမူ့ခံရသော အပျိုကြီးများသည် လူအများပြောမဲ့ စကားကို အစတည်းက ကာကွယ် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ ဘာပဲပြောပြော အပျိုကြီးဆိုတာ ဖန်တီယူလို့ မရတဲ့ အရာပါ ပါရမီထူးလို့အပျိုကြီးဖြစ်ရတာပါ၊ အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပေးပေး အပျိုကြီးလုပ်လို့ တော့ မရတော့ ပါဘူး အပျိုကြီး တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်ပြုလို့ ရပါတယ်။ ရှားပါး ပစ္စည်းဟာ တန်ဖိုး ကြီးပါတယ်။ ဒီတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အပျိုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူစရာပါ အားငယ်စရာ မရှိတဲ့ ဘဝ မို လို့ရဲရဲကြီး ရှေ့ ဆက်ကြပါ၊၊( အင်း ဒီ ဘလော့ ဖတ်ပြီး အပျိုကြီးဘဝကို အားကျသွားတဲ့မမကြီးတွေရဲ့ကိုကို ကြီးတွေက တော့ဒင်ကြောင့် ငါ့ ဟာမတွေ အပျိုကြီးလုပ်ကုန်တာ ဆိုပြီ ငါ့ ကို ဘယ်လောက်တောင် တင်းနေမလဲ မသိဘူး ..အင်း ရေးသာရေးနေရတာ ကြောက်စိတ်လေးတော့ ဝင်မိတယ်)
ပြီးပြည့် စုံတဲ့အိမ်ထောင်သည်အလှ
အိမ်ထောင်ကျတယ် အိမ်ထောင်ကျတယ်နဲ့စကားလုံးတွေကို ခွဲခြားတွေးပြီး အိမ်ထောင်ပြုရမှာ ရင်လေးနေတတ်ကြတယ် ထင်ပ။ တကယ်တော့ လူတွေက အိမ်မှာထောင်ကျတယ်လို့မှတ်ယူပြီးတော့အိမ်ထောင်ပြုရမှာ ဝန်လေးနေတာပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ဆိုသလိုဘဲ ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်တွေးပြီး ရင်လေးတာ ပြစ်ပြောလို့ မရပါဘူး လူအမျိုးမျိုးထဲမှာ လူလာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော့ အတွေးကလည်း ဒီလိုဗျ အိမ် ဆိုတာက ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူနဲ့အတူနေပြီး မိဘ အထောက်ပံ့အားလုံးကို စွန့် လွတ်ပြီး ဆင်းရဲ အတူ ချမ်းသာ မခွဲပဲ နှစ်ယောက်သား ဘဝကို ကောင်းတူဆိုးဖက် ရင်ဆိုင်ဖို့ဘဝ ရှေ့ တန်းက ခံတပ်စခန်း တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီး နေထိုင်တဲ့နေရာပေါ့ ဗျာ၊၊ ထောင် ဆိုတာက ကိုယ့် မှာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ချစ်ခြင်း ၊ ကြင်နာ ညဃင်း၊ ယုယတွယ်တာခြင်း၊ မြတ်နိုးမူ့ အစုစု ၊ ဂရုတစိုက် အားကိုးလိုမူ့ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှ ပေးအပ်လို့ မရတဲ့ခံစားချက် အဝဝ တို့ က သစ္စာအထုပ်ထဲ ထည့်သံယောဇဉ်ကြိုးနဲ့ခိုင်ခိုင် တုပ်ပြီး တည်ငြိမ်တဲ့စိတ် ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်ချစ်တဲ့ချစ်သူရဲ့ နှလုံးသား အိမ်တော်မှာ လွတ်ရက် မလိုပဲ တသက်တာ အတွက် တုနိုင်းမမှီတဲ့လောက အဆောက်အအုံ အဖြစ် ကိုယ်တိုင်ဝင်ခဲ့ တယ်လို့သဘောထားပေးကြပါ၊၊ တနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခ တွေအပြည့် နဲ့မကောင်းတဲ့ သူတွေ အပြစ်ပေးတဲ့ထောင်လို့ မမြင်ဘဲ အသစ်သဘောနဲ့ချစ်သူကိုခြင်း ကိုက်မှာ စိုးလို့ထောင်ပေးထားတဲ့ခြင်ထောင်လို့အန္တရာယ်ကာကွယ် ပေးမဲ့ထောင်လို့ မြင်ကြည့် ပေးပါ၊
အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ရင် လွတ်လပ်မူတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်တယ် သွားချင်တာသွားလို့ မရ နေချင်သလို နေလို့ မရ စသည့်အကြောင်း ပြချက် အမျိုးမျိုးကလည်း အိမ်ထောင်ပြု ရမှာကို ကြောက်စေပါတယ်၊၊ တကယ်တော့လွတ်လပ်မူ နောက်ကွယ်က မကောင်းမူ့ အမျိုးအမျိုးနဲ့ပျက်စီးချင်းဆိုတာ ခဏတာတောင် မကောင်းပါဘူး၊ အိမ်ထောင်ကျလို့လွတ်လပိမူ့ တွေ ဆုံးရုံးသွားတယ်ဆိုတာ ကလည်း မဟုတ်ပါဘူး ။ ထိန်းသိမ်း မူ့ အောက်မှာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် နည်းနည်းလေးပါပဲ၊၊ စည်းကမ်းဆိုတာကလည်း ချစ်ခြင်း စာအုပ်ထဲက စာမျက်နာ တစ်ချို့ ပါပဲ အမျီုးသမီးတွေ မီမီ ခင်ပွန်းကို စိုးရိမ်းပြီးစွာနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန် ပြီူဆုံးချိန်မှာ မိမိမျက်စိရှေ့ မှာ ထားပြီးတော့လိုအပ်သမျှ လုပ်ပေးမယ် လင်ယောကျာ်းရဲ့အကြင်နာကို အပြည့် အဝ လိုချင်တဲ့ချစ်ခြင်းရဲ့အတ္တ အတွက် ဟို မသွားရဘူး ဒီမလာရဘူးလို့သတ်မှတ်တာကို အပြစ်လို့ မမြင်ပဲ ကိုယ့် အတွက် ပြောနေတာပါလားလို့ဖြည့် တွေးပေးရင် လွတ်လပိမူ့ မရှိဘူး ဆိုတဲ့စာမျက်နာဟာ အိမ်ထောင်ရေး ကျမ်းမှာ အလိုလို ပျောက်ကွယ် သွားပါလိမ့် မယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်တွေဟာ မိန်းမပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယောကျာ်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိုးရိမ်းစိတ်ကြီး တတ်ကြပါတယ်၊၊ အမျိုးသမီးဟာလည်း အိမ်မှာ အိမ်အလုပ်လုပ်နေပေမယ့်စိတ်က ချစ်လင်အပေါ်မှာ အမြဲရောက်ပြီး အိမ်က ယောကျာ်း ထွက်သွား ကတည်းက ကျောပြင်းကို ကြည့် ပြီး လမ်းသွားရင်း ဘာများဖြစ်မလဲ ကားတွေများတဲ့ လမ်းမှာဆိုရင် အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်းရ ခရီးဝေး သွားရင်လဲ အဆင်ရော ပြေပါ့ မလား ဒီလို အတွေးတွေနဲ့လူက အိမ်မှာ စိတ်ကယောကျာ်းနောက်လိုက်ပြီး ပူပန်နေကြရတာပေါ့ ။ စားချိန်ရောက်ရင်လည်း သူစားကော စားပြီးပြီလား အိမ်ပြန်စားတဲ့ သူဆိုရင်လည်း အချိန်တန်လို့ မှပြန်မရောက်ရင် ဘာလို့ လဲ အလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေလို့ လား ဘာများ ဖြစ်နေလို့ လဲ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ စိတ်ကို အမြဲ ပူပင်စေခဲ့ ပါတယ်။ ယောကျာ်းတွေလည်း အတူတူပါပဲ မိန်းမသာ အိမ်မှာ ထားပြီး အလုပ်လုပ်နေရပေမယ့်စိတ်ကတော့မိန်းမအိမ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ ကြောက်နေမလား ပျင်းနေမလား ဒီအချိန်သူဘာများ လုပ်နေမလဲ အဝတ်လျှော်ရင် ရေးချိုးခန်းထဲများ ချော်လဲ နေမလား ထမင်းဟင်း ချက်ရင် အပူတွေများ လောင်နေမလား ဂက်အိုးတွေလဲ လုံပါ့ မလား တစ်ခုခု ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့လူပင်ပန်ူး စိတ်ပန်းနဲ့ ပေါ့ ၊ ဒါပေမယ့် လည်း တစ်နေ့ တာရဲ့ လူပင်ပန်း စိတ်ပင်ပန်းမူ့ တွေဟာ အိမ်အပြန် တစ်ယောက်မျက်နာတစ်ယောက် တွေ့ တော့ လဲ သူအလိုလို ပြေဖျောက်ပြီး ကြည်နူးမူ့ အပြည့် နဲ့နေ့ ရက်တွေကို ကုန်ဆုံးစေတာ ဘယ်လောက်ကြည်နူးဖို့ကောင်းမလဲ ၊၊
လင်ရယ် မယားရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ထောက်ထား ညှာတာမူ့ နဲ့နောက်ပြန်ကြည့် တတ်တဲ့စာမျက်နာ တစ်ခု ဘဝမျက်နာမှာ အလိုလို တိုးလာ ခဲ့ တယ် ။ ထောက်ထား ညှာတာ နောက်ပြန်ကြည့် တတ်တယ်ဆို တာကတော့မကောင်းမူ့တစ်ခုခု လုပ်တော့ မယ် ဆိုရင် ငါတကယ်လို တစ်ခုခု ဖြစ်သွားခဲ့ ရင် ငါ့ မိန်းမတော့လောကအလည်မှာ အားကိုးရာမယ့်မျက်နာ ငယ်နေတော့ မှာပဲ ဆိုတဲ့ စိတ် အရှက်ကွဲ အကျိုး နည်းစေမယ့်အလုပ် ဥပမာ မယားငယ်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခိုးဝှက် မကောင်းမူ့ဒုစရိုက်တို့ ကိုလုပ်လို့ပေါ်သွားခဲ့ ရင် ပတ်ဝန်ကျင်မှာ ငါ့ မိန်မတော့မျက်နာငယ်ငယ်နဲ့ဘဝကို ဖြတ်သန်း ရတော့ မှာပဲ ဆိုတဲ့ရှေ့ ဖြစ်လာမယ့်အရာကို နောက်ပြန် မိန်းမကို လှည့် ကြည့် လာတတ်တွေကြောင့်အိမ်ထောင်ရှင်တွေဟာ အမှားနည်း လာခဲ တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။စားတဲ့ နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သွားတဲ့ နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်ရှင်တွေဟာ တကယ့် ကို ကြည်နူးစရာကောင်းသလို အားကိုးရာနဲ့အားကိုးခံ ပိတိလေး တွေကတော့အိမ်ထောင်မဲ့ တွေထက် အနှိုင်းဆ မဲ့သာပါတယ်။ အစားစားရင်လဲ တစ်ယောက်မျက်နာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ငပိရည်နဲ့စားနေရပေမယ့် လည်း ပိတိလေး ခတ်ထားတဲ့ဟင်းဆိုတော့အရသာက သာမည မဟုတ်တော့ ပဲ အဟာရအပြည့် နဲ့နတ်သုဒ္ဒါနဲ့ဘယ်လဲ နိုင်ပါ့ မလဲနော်.....
နတ်သဓ္ဒါ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ ဆိုတာတော့မစားဖူးတော့ မသိပေမယ့် သူချက်တဲ့ ငပိ တစ်ခွက်ကတော့တော်တော်ကို ကောင်းပါတယ် ။ ဒါကလည်း စကားအဖြစ်သာ ပြောတာပါ မိန်းမတွေဟာ သူတို့ သာ ဖြစ်သလို စားချင်စားမယ် ယောက်ျားကိုတော့ကောင်းသထက် ကောင်းတဲ့ဟင်းကိုပဲ ချက်ကျွေးပြီး ယောကျာ်း က အရမ်း စား ကောင်းတာပဲ လို့ ပြော သူတို့ မျက်နာက အာဖရီက ကစိန်တစ်လုံး ကောက်ရလိုက်သလိုပဲ ပျော်နေတတ်ကြတာ အိမ်ထောင်ရှင်မိန်းမတွေပါ၊။ လူဘဝဆိုတာ အခက်အခဲတော့ရှိတတ်ကြတာပဲ လေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကြုံ လာမယ့်လောကဓံကို ကြံ့ ကြံ့ခံပြီး ဘဝတစ်ခုကို ရဲရဲရင်ဆိုင် ဖို့ တော့ လိုလိမ့် မယ်၊ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ဗျာ ကိုယ် ကြိုးစားမူ့ တိုင်းမှာ ကိုယ့် ချစ်သူ မျက်နာလေး ရှိနေမယ်ဆိုတော့စိတ်ဓါတ်တွေ အားငယ်နေတဲ့အချိန်တွေ ကွယ်ပျောက်သွားမှာပါ အရာရာတိုင်းမှာ သူ့ အတွက် သူ့ အတွက် ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ရိုးသားစွား ကြိုးစားပါ မပြည့် စုံတဲ့ဘဝ ခဏလေး နဲ့ပျောက်ကွယ် သွားပါလိမ့် မယ် ၊၊ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်ဆန်ပြီး တိုင်ပင်ဖော်ရှိတဲ့ဘဝကြီးထဲမှာ အသက်ရှင် ရပ်တည်မယ့် အစား အိမ်ထောင်ပြု မယ် အရွယ် ရောက်ရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူနဲ့ဘဝကို ကြည်နူးစွာ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းတာဟာ လောကရဲ့အလှတရားပါ၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် အချစ်နဲ့မကင်းတဲ့ လောက ကြီးမှာ ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ကိုယ့် ချစ်တဲ့ သူနဲ့ထာဝရပျော်ရွင်း သော ဘဝ လေး တည် ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
မှတ်ချက်။ ။ စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ပဲ လူပျိုကြီး လုပ်ကြမလား...အပျိုကြီး လုပ်ကြမလား..ဒါမှမဟုတ် ပြီးပြည့် စုံတဲ့အိမ်ထောင်သည် ဘဝကို နေသွားကြမလား ..ကဲ ဘယ်လိုတွေ စဉ်းစားထားကြလဲ ?
At 8/20/2012 09:28:00 AM